WW12 Eco Bubble Washer with Simply Add During Wash, 12kg | WW12K8412OW/FQ | Samsung Singapore
EcoBubble™ နည်းပညာပါဝင်တဲ့ ငြင်းဆန်၍မရအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ အ၀တ်လျှော်နိုင်မှု VRT Plus™ နည်းပညာကြောင့် နဲပါးတဲ့ အသံထွက်မှု နဲ့ တုန်ခါမှု လျှော့နည်းခြင်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ တံခါးပေါက်ကြောင့် အ၀တ်အထည်များကို လွယ်ကူစွာထုတ်သွင်းနိုင်ခြင်း
အင်္ကျီတစ်ထည် မေ့ကျန်ခဲ့ပါသလား? Add Wash က အလွယ်တကူဖြင့် မေ့ကျန်ခဲ့သော အဝတ်များကို လျှော်နေစဉ် ထည့်နိုင်ပါသည်။ လက်လျှော်အဝတ်များကို ရေလျှော်ချင်ရုံ အခြောက်ခံချင်ရုံ သက်သက်လုပ်ချင်ပါကလည်း အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
* အထဲက အပူချိန်က 50 ဒီဂရီ အောက်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် တံခါးဖွင့် ထည့်နိုင်ပါတယ်
** Mouse click နှင့် keyboard မြားတို့ကိုသုံးပြီး တံခါးကို ရှာနိုင်ပါတယ်
အဝတ်လျှော်ခြင်းသည် Samsung ၏ ဆန်းသစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပိုမို လွယ်ကူလာသည်။ Smart Control က smartphone App* ကို သုံးပြီး အဝေးက ထိန်းချုပ်ကာ စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါတယ်။ အိမ်ပြင်မှာဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
မေ့နေသော အရာများ ရှာတွေ့လို့လား?
လည်ပတ်ခြင်းကို သင့်ဖုန်းဖြင့် ခဏရပ်ရန်
စလျှော်လျှင် ဖုန်း alarm မြည်ရန်
"ကြိုလျှော် အထည်များ ရေလျှော်ရန်သာ"
* ကြိုးမဲ့စနစ် လိုအပ်သည်။ Samsung Smart Home app ကို App StoreTM နှင့် Google PlayTM တွင် ရနိုင်ပြီ။ App StoreTM သည် Apple, Inc ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ Google PlayTM သည် Google, Inc ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
** Mouse click နှင့် keyboard မြားတို့ကိုသုံးပြီး smart control ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ
Eco Bubble™ နည်းပညာက အပူချိန်နည်းနည်းနဲ့ အဝတ်များကို အားကောင်းကောင်းဖြင့် လျှော်ပေးပါသည်။ ဆပ်ပြာမှုန့်များက အမြှုပ်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး အဝတ်များထဲသို့ လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်သွားပြီး အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် အဝတ်များကို ကာကွယ်ပေးပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်။
Samsung အဝတ်လျှော်စက်အသစ်က 59 မိနစ်* အချိန်အတွင်း အဝတ်များကို အပြီး လျှော်ပေးပါသည်။ Speed Spray ကို သုံးပြီး အဝတ်များကို အားကောင်းကောင်းဖြင့် လျှော်ပေးပြီး 59 မိနစ်* အချိန်အတွင်းမှာကို လျင်မြန်သော အရှိန်ဖြင့် အပြီး လျှော်ပေးသည်။ *
Bubble Soak နည်းပညာက အစွန်းများကို ဖယ်ရှားဖို့ အကူအညီပေးမှာပါ။ အဝတ်များကို အမြှုပ်များထဲမှာ စိမ်ထားစေပြီး အစွန်းများကို သေချာ လျော့ပါးစေပါတယ်။
Samsung အဝတ်လျှော်စက်၏ 12kg ကြီးမားသော စွမ်းဆောင်ရည်က သင့်အဝတ်များကို တစ်ခါတည်းနှင့် အကုန် အပြီး လျှော်ပေးမှာပါ။ အချိန်နည်းနည်းပဲ ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်များကို သင့်ဘာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒီဂျစ်တယ် ပြောင်းရွေ့ မော်တာက ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းနှင့် သံလိုက်ကို သုံးပြီး လည်ပတ်စေပါတယ်။ မော်တာအသစ်က ပွတ်တိုက်မှု နည်းစေပြီး ဆူညံမှုနှင့် တုန်ခါမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ပွတ်တိုက်မှု လျော့နည်းမှုက စက်ချို့ယွင်းမှုကိုလည်း မဖြစ်စေတော့တဲ့အတွက် ဒီဂျစ်တယ် ပြောင်းရွေ့ မော်တာကို ၁၁နှစ် အာမခံပါသည်။
VRT Plus™ နည်းပညာသည် အဝတ်လျှော်နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်မည့် ဆူညံမှုနှင့် တုန်ခါမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ 3D တုန်ခါမှု အာရုံခံကိရိယာက မြန်မြန်လည်နေရင်တောင်မှ သေချာ ထိန်းပေးထားပါသည်။
* VRT လုပ်ဆောင်ချက်မပါသော Samsung အဝတ်လျှော်စက်များနှင့် ယှဉ်လျှင်
** အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်မည့် တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံမှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမည်။
* Samsung Smart Home app သည် App StoreTM နှင့် Google PlayTM တွင် ရနိုင်ပါသည်။ App StoreTM သည် Apple, Inc ၏ အမှတ်အသားဖြစ်ပြီး Google PlayTM သည် Google, Inc ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
12.5 kg Washing Capacity (kg)
Energy Consumption (annual) 141kWh
Water Consumption (annual) 11700 L
Presidents Design Award 2016